Afọ Gated: Ọnụ Yourzọ tomá Gị Maka Ezi B2B Na-eduga! | Martech Zone
Gated ọdịnaya bụ atụmatụ nke ọtụtụ ụlọ ọrụ B2B na-eji nyefee ọdịnaya dị mma na nke bara uru iji nweta ezigbo ndu na mgbanwe. Enweghi ike ịnweta ọdịnaya gbara ọsọ ma ọ nwere ike ịnweta ya mgbe ịgbanwere ụfọdụ ozi dị mkpa.
80% nke akụ ahịa ahịa B2B nwere ọnụ ụzọ; dị ka ọnụ ụzọ gated bụ ihe atumatu nye ụlọ ọrụ ọgbọ B2B.
Ọ dị mkpa ịmata mkpa nke ọdịnaya nwere oghere ma ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ B2B yana ụdịrị ogo dị elu kwesịrị ka ihe karịrị nanị ịkpọtụ aha. N'ihi ya, ebe a bụ otu isiokwu raara nye a bara uru akpan owo nwere ikike imetụta àgwà nke edu ọgbọ maka ụlọ ọrụ B2B.
Gated ọdịnaya maka ihe ọ bụla inbound omume bụ free; a na-enye ya naanị site na mgbanwe ozi. Ihe kpatara izobe ọdịnaya bụ iji nweta ndu. Mgbe onye ọrụ batara na webụsaịtị ma na-achọ ibudata akụnụba; ọ ga-ajụ onye ọbịa ka o mejupụta fọm. Formdị a bụ ozi dị oke mkpa maka marketer iji jide ndu ahụ. Ndu nke chọsiri ike ibudata ihe onwunwe nwere ike bụrụ ezigbo ụzọ.
Ya mere, nke a bụ ụdị uru dị iche iche nke ọdịnaya nwere:
Na-abawanye ohere gị ịnweta ezigbo ndu
Emeziwanye ahịa sitere na ndu
Ka anyị mara onye ahịa gị nke ọma site na ịnye gị ohere ịnweta nghọta ka mma banyere onye ahịa ahụ
Gated ọdịnaya ezube inye gị a mma adịgide na ndị ọzọ akara mara ndị ahịa gị ma ọ bụ ịmatakwu banyere gị ọbịa. Gated ọdịnaya nwekwara ihu ọma ya dị ka ịnwe obere uru SEO, ohere ịchụpụ atụmanya gị na webụsaịtị gị, enweghị ngosipụta ọhụụ maka onye ọrụ gị nke gaara enyere ha aka ịghọta onye ị bụ, ma ọ bụ inwe obere ihu akwụkwọ ma ọ bụ ọbụna mkpochapu n'okporo ụzọ
A ghaghị iji ọdịnaya ndị nwere ibo ụzọ jiri nlezianya mee ihe mgbe ị nwere usoro ndị ọzọ ma ị ka nwere ike ịhapụ ụfọdụ ndị ọbịa. Agbanyeghị, ọ nwere ike ịba uru iji nweta ezigbo ndu, n'ihi na onye chọrọ n'ezie ịmara maka ika ahụ ma ọ bụ chọọ ọdịnaya, ma chọọkwa ụfọdụ ọrụ nwere ike ịmekọrịta gị ozi.
Yabụ kedu ihe atụ nke ọdịnaya nwere ike ịnabata na webụsaịtị gị n'olileanya ị nweta ezigbo ndu?
Nke a bụ nlele ngwa ngwa na ụfọdụ ụdị kacha mma nke ọdịnaya nwere:
eBooks - Nnọọ ewu ewu n'etiti ndị ọbịa; e-akwụkwọ bụ ihe nduzi nke nwere ike ịnye gị ụfọdụ ozi ziri ezi na otu isiokwu ọkachamara. Ọ nwere ike ịbụ na ụdị nke a mkpumkpu ndu nwere ike inyere ewu ika ika mmata na ika ikike; na-eme ka ọ bụrụ onye na-agba mgba siri ike ịbụ otu n'ime ụdị kachasị mma nke ọdịnaya nwere ihu.
Akwụkwọ akụkọ - populardị ọzọ a na-ewu ewu nke nwere ọdịnaya - akwụkwọ ahụaja bụ ụdị magburu onwe ya nke ọdịnaya nwere. Ọ bụ ọkachamara n’onwe ya ma nwee ike ịnye ezigbo akụkọ gbasara isiokwu ọbụla edere ya. Akwụkwọ na-acha ọcha na-ewu ewu dịka ha bụ isi ntụkwasị obi nwere ntụkwasị obi nke ọdịnaya mara mma ma nwee ike inye aka mee ka ị bụrụ onye isi echiche. Gated ọdịnaya nwere ike ịbụ nnukwu isi iyi nke ezi na-eduga dị ka ọ pụrụ ime ka ọtụtụ ndị mmadụ tụkwasị gị obi na chọrọ ibudata gị whitepaper ọmụma.
webinar - Webinar bụ ihe atụ ọzọ nke ezigbo ọdịnaya eji agba akwụkwọ. Ọ bụ nnukwu ụzọ maka ndị ọbịa ndị dị njikere isonye na mmekọrịta gị na ha. Kindsdị omume ndị a na-enyere aka iwulite ntụkwasị obi na mmekọrịta ogologo oge. I nwekwara ike ịzụlite ndị ndu a nwere mmasị ma ọ bụ ndị na-edebanye aha maka webinar. Nke a bụ otu ụdị nke ọdịnaya nwere ike ịnabata ezigbo ụzọ.
Onyinye ọdịnaya dị ezigbo mkpa na njem ndị ahịa. Ọ dị mkpa ịnwe ọdịnaya ejije ozi dị mma ka ewepụtara maka atụmanya gị maka iwulite mmekọrịta na usoro nurturt.
Tags: ahịa b2bederedegated ọdịnayaedu ọgbọndebanyewebinarswhitepapers
Madhavi bu ihe eji ede okike n’ime onwe ya ya n’omume di iri ato + na ulo oru B8B. Dika onye ode akwukwo nwere mmuta, ebumnuche ya bu itinye uru nye ndi ahia site na nka ya. Ọ na-achọ ịmebe njikọ asụsụ n'etiti teknụzụ na azụmahịa ụwa na ịhụnanya ya maka okwu ederede. Na mgbakwunye na ide ọdịnaya, ọ hụrụ agba na esi nri!